Wikipedia:Takelaka/Tahiry 2019 - Wikipedia
Roa arivo taona izay no nisian'ny rakipahalalana voalohany ; ny rakipahalalana voalohany, Tantara Voajanahary ("Histoire Naturelle" amin'ny teny frantsay), dia nosoratan'i Pliniosy Be Taona tamin'ny 77 CE tany ho any. Ny raki-pahalalana araka ny amantaratsika azy amin'izao fotoana izao, dia nipoitra tamin'ny taonjato faha 17. Tafiditra anaty boky iray ny raki-pahalalana, kanefa ny raki-pahalalana sasany, toa ny Encyclopaedia Britannica amin'ny fiteny anglisy, na ny Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana amin'ny fiteny espaniola, dia raki-pahalalana misy "volume" amam-polony (32 ho an'ilay voalohany, 70 ho an'ilay faharoa). Ankehitriny, misy raki-pahalalana elektrônika (an-tranonkala na amin'ny CD), toa i Wikipedia (manana sampanana amin'ny fiteny mahery ny 250), na Citizendium. (tohiny...)
Ny tetiandro miozolmana na tetiandro silamo dia tetiandro ampiasain'ny fivavahana silamo ka ny iray volana ao aminy, izay mitovy amin'ny fitsingerenan'ny Volana amin'ny Tany, dia misy 29 na 30 andro ary ny iray taona misy 354 na 355 andro. Tetiandro manara-bolana ny tetiandro miozolmana. Ny fanombohan'ny volana tsirairay dia mifanandrify amin'ny fotoan'ny tsinam-bolana hitan'ny maso. Ampiasaina indrindra amin'ny fankalazana amin'ny fivavahana silamo ny tetiandro miozolmana. Tsy misy ny fampifanandrifiana ny taona silamo amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro na amin'ny fizaran-taona; noho izany dia tsy misy koa ny volana fanampiny (volana faha-13), tsy tahaka ny ao amin'ny tetiandro manara-bolana sy masoandro toy ny tetiandro hebreo.
Ny taona 1 amin'ny tetiandro miozolmana dia mifanandrify amin'ny taona 622 taor. J.K. ary ny andro voalohany dia mifanandrify amin'ny 15 na 16 Jolay tamin'io taona 622 io. Andro voalohany amin'ny volana Muharram izany. Io no andro voalohany tamin'ny fifindrà-monin'i Mohamady sy ireo mpanaraka azy avy ao Maka hankany Iatriba (tanàna fantatra amin'ny anarana hoe Madîna amin'izao fotoana izao). Izany fifindrà-monina izany no atao hoe Hiǧrah (هجرة) amin'ny teny arabo. Folo taona taorian'io andro io no nampiasana ny tetiandro miozolmana. Atao hoe التقويم الهجري‎ / at-taqwīm al-hijrī io tetiandro io amin'ny teny arabo. (tohiny...)
Ny matoanteny dia teny (sokajin-teny) izay ampiasaina ao amin'ny fehezanteny na fehezankevitra mba hilazana asa na toetra na fifandraisana na fisehoan-javatra ka mety miovaova endrika (maneho fotoana, fiendrika, filaza, fanehoan-javatra sns. arakaraka ny fiteny), nefa misy koa ny fiteny tsy manova ny endriky ny matoanteny mihitsy. Ny isan'ireo antom-piovan'endriky ny matoanteny ireo dia miovaova araka ny fiteny. Mety hifandray amin'ny endriky ny teny mifandray aminy mivantana izany fiovan'endriky ny matoanteny izany ka isan'izany ny maha tokana na maro na ny maha kandahy na kambavy ny mpandray anjara (lazaina, fameno, sns), sns. Ireto misy matoanteny amin'ny fiteny malagasy: mihinana, mandehana, nifampijerena, sns. (tohiny...)
Ny teny hoe hebreo na hebrio dia avy amin’ny teny anglisy hoe hebrew na frantsay hoe hebreu izay samy avy amin’ny teny latina hoe hebraeus izay avy amin’ny teny grika hoe Ἑβραῖος / hebraios, izay avy amin’ny teny hebreo hoe עברי /’ivri. Ny teny hebreo hoe 'ivri (na 'ibri) dia mety ho avy amin’ny fototry ny matoanteny hebreo hoe עבר / avar izay midika hoe "miampita" na "madalo". Ny Hebreo, arak'izany, dia ireo "mpiampita" na "mpandalo" fa tsy monina, ireo eny ampitan’ny ony, ireo mpirenireny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/Tahiry_2019&oldid=798602"